Woza izinsuku zasehlobo ezifudumele futhi kukhona ithuba elihle ukuya ukuphumula emazweni ashisayo, futhi inkinga ngayinye isikhathi esisodwa esiyinhloko - Kuyaphuthuma a Swimsuit ephelele! Lokhu akusona isimanga, ngoba ogwini yilowo nalowo wesifazane ufuna ukubheka njengento enhle ngangokunokwenzeka. Futhi mhlawumbe hhayi badinga Swimsuit e ikhophi eyodwa, futhi ukunquma ezahlukene, ngaphansi ukuzimonyonga ezahlukene, ngaphansi umbala Panama, amabhantshi nezicathulo. Futhi nakanjani kudingeka ukugcizelela isithunzi sibalo nesikhumba amaphutha. Mhlawumbe kukhona eyodwa impendulo jikelele - sezimpahla zokubhukuda "kaVictoria Imfihlo".
Into ebaluleke kakhulu ukuthi abambe iso lakho - lokhu ungumuntu ocebile anhlobonhlobo onobuhle lokhu brand. Njalo fashionista ziyoyizwa kumuzwa wakho kanye idatha yangaphandle in the "Imfihlo kaVictoria" akuyona Swimsuit. Lokhu akufanele ngisho okomkhiwane kuphela, ngoba uhla inkampani isidlulile ebantfu 500, futhi njalo abasafufusa izinto ezintsha. Brand "Imfihlo kaVictoria" igcina ijubane nalezi zikhathi, abadali ikhumbule zonke yakamuva zamanje yemfashini, kanye nezidingo abathengi. Ngokuthenga ithikithi Swimsuit "Victoria Imfihlo", akungabazeki ukuthi uzokubona konke - yesimanje design, indwangu, izesekeli, ukuthunga. Konke high kakhulu eyenziwe. Akumangalisi ukuthi lokhu inkampani abalandeli abaningi abaqotho emhlabeni wonke. Kuyinto mkhuba zomhlaba fashion. Awukho omunye inkampani ye Lingerie, ukuthi kungaba nje njengoba othandwayo. Sezimpahla zokubhukuda "Imfihlo kaVictoria" (izithombe siliqinisekise), ukubukeka emangalisayo futhi ngokushesha amehlo.
Le nkampani "Imfihlo kaVictoria" yasungulwa eminyakeni engaphezu kwamashumi amathathu edlule. Ngo-1977, uRoy Raymond eyasungulwa ifemu elincane ngokushesha waqala ukuthuthukisa futhi ikhule. Kusukela ekuqaleni kwawo-90-yalolucwaningo imikhiqizo yayo baba atholakale abesifazane emhlabeni wonke. Ngempela, inkampani uye wagxila amanani ayo ezingabizi ukuqinisekisa ukuthi anhlobonhlobo abathengi komholo ojwayelekile kwadingeka ithuba ukuthenga imikhiqizo. Sezimpahla zokubhukuda "Victoria Imfihlo" abhekwa lizinga isitayela, ukunambitheka kanye okunethezeka.
Bonisa "Imfihlo kaVictoria"
Unyaka ngamunye "Imfihlo kaVictoria" ulungiselela umbukiso imilingo Amaqoqo amasha, ubuhle okunethezeka Lingerie ukubonisa onobuhle abaziwayo we sha. Zibizwa ngokuthi "izingelosi" ngoba ngokuvamile baya kubukiswa nge ezihlukahlukene amaphiko emhlane wakhe, ehlotshiswe amatshe, izimpaphe, futhi ngaleyo ndlela babe efana izingelosi, Fairies, izimvemvane, izinyoni.
Isenzakalo esidume kunazo zonke "izingelosi" - Miranda Kerr, Kendis Sveynpoul, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Lili Oldridzh, Dauttsen Krus, Erin Hizerton, Behati Prinsloo kanye nezinye onobuhle. Ngokwesiko, umbukiso njalo ngonyaka bamvakashele e-New York, kodwa kulo nyaka "Victoria Imfihlo" zizoshintsha imithetho yayo. Amakhulu osaziwayo kukhona izivakashi yonyaka izenzakalo emangalisa futhi okuthakazelisayo, izinto, anikezwe ngesikhathi show, okukhethekile futhi azihloselwe ukudayiswa. Ticket izintengo isukela 16 kuya kwezingu-20 zamaRandi. umbukiso yalomnyaka kuyokwenzeka ngo-December 2 e-London.
Sezimpahla zokubhukuda "Victoria Imfihlo": Izibuyekezo
Ngaphambi kokuba uthenge lolutsite, eziningi ezithakazelisayo ukwazi umbono abanikazi lucky izimpahla lokhu brand. Yiqiniso, ukukhuluma mayelana ukukhiqizwa yasekuqaleni, ngoba Chinese manje kwemifanekiso yavama. Sezimpahla zokubhukuda "Victoria Imfihlo" amazwana kubangelwa ikakhulu ngomdlandla. Bamhlonipha abesifazane amahle Ungaqonda, ngoba intengo enengqondo into izinga ezifana le ekwenza uhlale ujabule, nangomdlandla kuyindlela eliphezulu decor - obunamaparele amatshe noma ubuhlalu. Ngokusho isipiliyoni yabathengi, swimsuits musa fade emva pool, musa fade elangeni, bodices ne push-apom zibukeke ngcono amabele bese uyinika i ijamo ezikhangayo, encibilika bilayer, gum Friend futhi nokunwebeka. Kungani Izibuyekezo emihle kuphela ingxenye enkulu (kodwa hhayi bonke)? Ngenxa yokuthi gripe kuphela yokuthi kunzima oda imodeli kwisikhangisi, kunzima ukukhetha ubukhulu ngaphandle uzama ngandlela imodeli bolshemeryat. Kodwa for the lula amakhasimende ethenga "Victoria Imfihlo" wavula emadolobheni ahlukene.
Ekwindla ka-2011 e-inhloko-dolobha yaseRussia, owokuqala brand esitolo brand uvulekele, kukhethwa ezihlukahlukene abathengi wavula Lingerie, izimonyo. Futhi ethulwa amakha abangu esinegama, izingubo abayitoho, esebenzisa imikhiqizo ukunakekelwa umzimba kanye izesekeli, zonke izinhlobo sezimpahla zokubhukuda.
"Imfihlo kaVictoria" eMoscow namuhla okwethulwa ezitolo okudayisa eziningana. sevisi yesistimu e Izitolo okudayisa brand wenziwa esiphezulu inkonzo induduzo ikhasimende, isaphulelo nice imodeli amaqoqo ngonyaka odlule ngeke sijabulise, emgqeni pink is kuthambekele abafundi, ngakho amanani ziyancipha. Beautiful wesifazane - ke kodwa ngowesifazane okhiphe Unesibindi, alunguza lengenamaphutsa. "Victoria Imfihlo" sezimpahla zokubhukuda kuzokusiza ukuhambisana lolwandle imfashini, kahle ukugcizelela isithunzi sibalo, ukusiza ukuzizwa ekhululekile ngasiphi resort.
Sisindvo neutron, i-proton, electron - ukuthi abafana ngazo?
Isifunda saseViatka: umlando nesimanje
Lolu hlobo losizo yesikhulumi laseSiberia. Amaminerali-Platform eSiberia